Nairobi, Kenya | Dec 24, 2002
iyadoo maalinta 27ka dadku ay udiyaar garoobayaan codbixinta doorashooyinka guud ee ka dhici doona dhamaan goboladda dalka kenya oo gobolka woqooyi bari uu kamid yahay ayaa maanta waxaa soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee deegaanka kamakunji kula hadlay musharaxa doorashada madaxwaynanimada xisbiga KANU Mr Uhuru Kenyatta oo u sheegay soomaalida in isaga ay u codeeyaan si uu ugala dagaalamo dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin soomaalida oo xad gudubyadda boolisku kamid yihiin.
waxaa kaloo uu sheegay in uhuru uu hagaajinayo xirfaddo shaqa siin ah dadka aan camalka haynin marka uu ku soo baxo doorashdda madaxwaynanimada.
inkastoo musharixiinta doorashhooyinka ay shan yihiin hadanna waxaa ugu xoog wayn KANU iyo isbahaysatada axsaabta mucaaradka ee loo yaqaano NARK oo Mwai Kibaki uu u sharax yahay.
Deegaanka kamakunji oo 18000 oo qof ay cod bixinayaan ayaa soomaalida codadkooda lagu sheegay 12000 oo kamid ah cod bixiyayaasha in ay yihiin soomaalida.
degmo walba waxaa u sharaxan mudanayaal ka socda axsaabta kala gadisan ee siyaasadda ku loolamaysa xiligan oo ah markii ay uga darnayd siyaasadda tan iyo xornimadii 1963 iyadoo ay usabab tahay NARK oo ah siyaasiyiin caan ka ah dalka kenya oo isbahaysatay markii Moi uu sheegay in xulashadiisu ay tahay Wiilka da'da yar ee UHURU Kenyatta oo siyaasadda ku cusub.
deegaanka kamakunji waxaa xisbiga Ford Poeple ee uu hogaamiyo simon nyajae ku taagan musharaxa kaliya ee soomaaliga ah magaalada nairobi oo lagu magacaabo Xasan Cali Aden.
mar aan la kulmay xasan ayaa waxaa uu iisheegay in uu doonayo sidii soomaalida ku dhaqan nairobi loogu heli lahaa xildhibaan ka hadla dhibaatada soomaalida ay ku qabaan booliska iyo hagaajinta wadooyinka xafaada islii ee soomaalidu ay dagto oo aad u burbursan isagoo intaas ku daray in soomaalidu ay u sabraan maalinta 27ka ee codbixinta dadku udareerayo 6da aroonimo ilaa 6da makhribnimo si aan ugu guulaysto kursiga Kamakunji.
gudoomiya ku xigeenka gudiga ganacsatadda xaafadda islii Xuseen Aar oo isaganna ii waramayay ayaa sheegay in dadka soomalida ay iska ilaaliyaan qabiilka oo si wada jir ah ay ugu codeeyaan Musharaxa soomaaliyeed.
AAR waxaa uu sheegay in Kenya marka lajoogo aan loo baahnayn in jilib jilib laisaga horyimaado isla markaana waxaa uu yiri dadku waxay u qaybsamaan kenya sida Kikuyo, Masaay, kisii, somali iyo kuwo kale.